Laptopကို မထိခိုက် မပျက်စီးစေဘဲ အထာကျကျ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အချက် (၇)ချက် - For her Myanmar
Laptopကို မထိခိုက် မပျက်စီးစေဘဲ အထာကျကျ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အချက် (၇)ချက်
by Phyu Thant
Laptop ကို သုံးတော့သုံးတယ်.. သေချာ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းဖို့ကျတော့ မေ့နေကြတယ်မလား..
Laptop မှာရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ဖုန်တွေ အညစ်ကြေးတွေကို တော်ရုံမမြင်ရလို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ မလိုဘူးလို့ တော်တော်များများက ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်တကယ်ကျတော့ Laptopတွေကိုလည်း သေချာ ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ မမြင်ရပေမဲ့ ပိုးမွှားတွေ၊ ဖုန်တွေကတော့ ကျိန်းသေရှိနေမှာပဲလေ.. ဒါကို နေ့တိုင်း ထိတွေ့နေတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်.. ဒါဆို ကိုယ့် ကျန်းမာရေးလည်း မထိခိုက်အောင်၊ Laptop လည်း မပျက်စီးအောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းကြမလဲ?
(၁) မတော်တဆမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။
မတော်တဆဆိုလို့ အကြီးကြီးတွေ တွေးနေပြီလား? ကိုယ်တွေလုပ်နေကျ စားစရာသောက်စရာတွေကို Laptop ဘေးနားထားပြီးစားတာမျိုး၊ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ကြောင်လေးတွေ၊ ခွေးလေးတွေက Laptop ပေါ် အိပ်တာမျိုး၊ Laptop နား ကပ်ချွဲနေတာမျိုး စသဖြင့်တွေက မတော်တဆဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်း အကြီးကြီးပါပဲ.. အထူးသဖြင့် သောက်စရာ ရေခွက်တွေ၊ အအေးခွက်တွေကို Laptop ဘေးနားထားတဲ့အခါ မတော်တဆ ဖိတ်စင်သွားတာမျိုး ဖြစ်ရင် Laptop ကို အနည်းနဲ့ အများတော့ ထိခိုက်စေနိုင်တယ် မဟုတ်လား… မတော်တဆဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင် Laptop မပျက်စီးအောင် တကူးတက ထိန်းသိမ်းနေစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့..
(၂) Laptop ကို မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။
Laptop ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆိုလို့ ဆပ်ပြာတွေနဲ့ ဆေးပြီး နေလှမ်းတဲ့ ဗီဒီယိုကြီး ပြေးမြင်မိ 😛 အက်ဒ်မင်တို့ တော်တော်များများက Laptop ရဲ့ ဖန်သားပြင်လေး သန့်ရှင်းနေရင် အိုခေပြီလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ့်တကယ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ့် ကီးဘုတ်တွေ၊ လေဝင်ပေါက်တွေနဲ့ Speaker တွေကိုကျတော့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွေမှာမှ ဖုန်တွေ၊ အမှိုက်တွေ၊ ကြေးညှော်တွေက အများဆုံး ရှိနေတတ်တာပါ။ ဒါတွေက ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လေ..
Related Article;ယောင်းမသိသေးတဲ့ Gmail ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄) ခု
(၃) Laptop ကို ကားထဲမှာမထားခဲ့ပါနဲ့
Laptop ကို ကားထဲလို အလုံပိတ်နေရာတွေမှာထားခဲ့တာက အန္တရယ် အရမ်းများပါတယ်နော်။ ကိုယ်တွေကတော့ မသိဘူးလေ.. ကားပေါ်က ဆင်းရင် Laptop ကြီးသယ်သွားရမှာ လေးတယ်ဆိုပြီး ပစ်ထည့်ထားခဲ့တာမျိုးက ခဏခဏလုပ်တာကလား :3 တကယ်တော့ နေပူထဲ ရပ်ထားခဲ့တဲ့ကား၊ အလုံပိတ်ကားတွေထဲမှာ Laptop တွေ ထားခဲ့မိရင် ကားထဲက အပူရှိန်တွေ၊ Pressure (ဖိအား) တွေက Laptop ကို ပျက်စီးစေပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
(၄) Laptop ကို ပါဝါပိတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့
Laptop နဲ့ ဇာတ်ကားကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတဲ့ ယောင်းတွေ လက်ထောင်ပါ :3 Laptop ကို သုံးပြီးလို့ နေရာက ခဏထသွားရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုသွားလုပ်လိုက်ရင် ဖြစ်ဖြစ် Laptop က အလိုလို Sleep Mode on သွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာ Laptop က ပိတ်နေသလိုလို ဆိုတော့ တော်တော်များများက သြော်ပိတ်ပြီးပြီပဲဆိုပြီး ကျော်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ.. နောက်တစ်ခါ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့မှ ဟာ.. မပိတ်ထားရသေးပါလားဆိုပြီး ဖြစ်ရော.. တကယ်တမ်း Sleep Mode က Laptop ကို လုံးဝ အနားပေးထားတာ မဟုတ်တော့ Laptop ကို ပျက်စီးစေတာ ကျိန်းသေပါပဲ။ အဲ့တော့ Laptop ကို မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် လုံးဝ ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
(၅) Cleanup ပုံမှန်လုပ်ပါ။
ဘာမှလည်း မသုံးဘဲနဲ့ စက်ကြီးက လေးနေတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြလား ယောင်းတို့… ဒါကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲဆိုရင် windows ထဲက Search bar > Disk Cleanup > Clean up System files > Ok ရွေးပေးလိုက်ရင် လေးနေတဲ့ ယာယီဒေတာဖိုင်တွေပျက်သွားမှာပါနော်။ ပုံမှန် Data တွေ၊ Cache တွေ ရှင်းမယ်ဆိုရင်
Windows+R > Prefetch > Ctrl+A > Shift+Delete ,
Windows+R > Temp > Ctrl+A > Shift +Delete ,
Windows + R > %temp% > Ctrl+A > Shift + Delete,
Windows + R > Recent > Ctrl+A > Shift+Delete ဆိုတဲ့ အဆင့်ဆင့်နဲ့ Cache တွေကို ရှင်းပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒီထဲက Prefetch, Temp, %temp% နဲ့ Recent ဆိုတာတွေကိုတော့ Box ထဲ ကိုယ့်ဘာသာ ရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်..
Related Article;အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ လွယ်ကူမြန်ဆန်စေမယ့် ကွန်ပျူတာကီးဘုတ် shortcut key များ
(၆) ဘက်ထရီကို တာရှည်ခံအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။
Laptop ကို အချိန်အကြာကြီး အားသွင်းပြီး သုံးတာမျိုး၊ ကြိုးတပ်လျက် တန်းလန်းနဲ့ Laptop ကို သုံးနေတာမျိုးဆိုရင် ဘက်ထရီကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အားကုန်ခါနီးထိ သုံး၊ အားသွင်း၊ အားပြည့်ရင် ပြန်ဖြုတ်၊ အဲဒီလိုသုံးတာမျိုးက Laptop ရဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ပိုပြီး တာရှည်ခံစေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သုံးရင်း ဘက်ထရီအရမ်းပူလာတာမျိုးကလည်း ဘက်ထရီကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို အဖြစ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမ တစ်မျိုးက Laptop ဘက်ထရီ အရမ်းပူလာပြီဆိုရင် Laptop သုံးတာ ရပ်လိုက်တာ၊ နောက်တစ်မျိုးကတော့ အောက်ခံ ပန်ကာ တပ်ပြီး သုံးတာပါ။ ဒီနည်းလမ်း ၂ မျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ ဘက်ထရီကို ထိခိုက်နှုန်းနည်းစေပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
(၇) Antivirus Software တွေ ထည့်သွင်းထားပါ။
Laptop ရဲ့ အပြင်ဘက်က ပိုးမွှားတွေ ရှင်းပြီးရင် Laptop ရဲ့ Software တွေထဲ ဝင်လာနိုင်တဲ့ Virus တွေကိုလည်း ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒီအတွက် အလွယ်ဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ Antivirus Software တွေကို ထည့်ထားလိုက်တာပါပဲ။ Antivirus Software တွေ ထည့်သွင်းထားပြီးရင်တော့ ပုံမှန် Update လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့လို့…
ဒီအခြေခံ အချက်လေးတွေကို သိသွားပြီး ဒီတိုင်းလေး လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့ Laptop လေးတွေကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပေါ့ပါးစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီရှင်… အဲ.. Laptop ကို တစ်ချိန်လုံးသုံးနေတာထက် ၁၅ မိနစ်တစ်ခါလောက် အဝေးတစ်နေရာကိုကြည့်ပေးတာက မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး သင့်တော်တယ်ဆိုလေးတော့ မမေ့လိုက်နဲ့နော်..
References : Wikihow, How Staff Works , Calling All Geeks
Phyu Thant(For Her Myanmar)
Laptop ကို သုံးတော့သုံးတယျ.. သခြော စနဈတကြ ထိနျးသိမျးဖို့ကတြော့ မနေ့ကွေတယျမလား..
Laptop မှာရှိနတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ၊ ဖုနျတှေ အညဈကွေးတှကေို တျောရုံမမွငျရလို့ သနျ့ရှငျးရေးလုပျဖို့ မလိုဘူးလို့ တျောတျောမြားမြားက ထငျနတေတျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တကယျ့တကယျကတြော့ Laptopတှကေိုလညျး သခြော ဂရုတစိုကျ ထိနျးသိမျးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျတှေ မမွငျရပမေဲ့ ပိုးမှားတှေ၊ ဖုနျတှကေတော့ ကြိနျးသရှေိနမှောပဲလေ.. ဒါကို နတေို့ငျး ထိတှနေ့တေဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး ဆိုးကြိုးတှေ အမြားကွီး ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ.. ဒါဆို ကိုယျ့ ကနျြးမာရေးလညျး မထိခိုကျအောငျ၊ Laptop လညျး မပကျြစီးအောငျ ဘယျလို ထိနျးသိမျးကွမလဲ?
(၁) မတျောတဆမဖွဈအောငျ ကွိုတငျကာကှယျပါ။
မတျောတဆဆိုလို့ အကွီးကွီးတှေ တှေးနပွေီလား? ကိုယျတှလေုပျနကြေ စားစရာသောကျစရာတှကေို Laptop ဘေးနားထားပွီးစားတာမြိုး၊ အိမျမှာမှေးထားတဲ့ ကွောငျလေးတှေ၊ ခှေးလေးတှကေ Laptop ပျေါ အိပျတာမြိုး၊ Laptop နား ကပျခြှဲနတောမြိုး စသဖွငျ့တှကေ မတျောတဆဖွဈစနေိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျး အကွီးကွီးပါပဲ.. အထူးသဖွငျ့ သောကျစရာ ရခှေကျတှေ၊ အအေးခှကျတှကေို Laptop ဘေးနားထားတဲ့အခါ မတျောတဆ ဖိတျစငျသှားတာမြိုး ဖွဈရငျ Laptop ကို အနညျးနဲ့ အမြားတော့ ထိခိုကျစနေိုငျတယျ မဟုတျလား… မတျောတဆဖွဈနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေို ရှောငျလိုကျမယျဆိုရငျ Laptop မပကျြစီးအောငျ တကူးတက ထိနျးသိမျးနစေရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့..
(၂) Laptop ကို မကွာခဏ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးပါ။
Laptop ကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျဆိုလို့ ဆပျပွာတှနေဲ့ ဆေးပွီး နလှေမျးတဲ့ ဗီဒီယိုကွီး ပွေးမွငျမိ 😛 အကျဒျမငျတို့ တျောတျောမြားမြားက Laptop ရဲ့ ဖနျသားပွငျလေး သနျ့ရှငျးနရေငျ အိုခပွေီလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ တကယျ့တကယျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျရမယျ့ ကီးဘုတျတှေ၊ လဝေငျပေါကျတှနေဲ့ Speaker တှကေိုကတြော့ မနေ့တေတျကွပါတယျ။ အဲဒီနရောတှမှောမှ ဖုနျတှေ၊ အမှိုကျတှေ၊ ကွေးညှျောတှကေ အမြားဆုံး ရှိနတေတျတာပါ။ ဒါတှကေ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျတယျလေ..
Related Article;ယောငျးမသိသေးတဲ့ Gmail ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ (၄) ခု
(၃) Laptop ကို ကားထဲမှာမထားခဲ့ပါနဲ့
Laptop ကို ကားထဲလို အလုံပိတျနရောတှမှောထားခဲ့တာက အန်တရယျ အရမျးမြားပါတယျနျော။ ကိုယျတှကေတော့ မသိဘူးလေ.. ကားပျေါက ဆငျးရငျ Laptop ကွီးသယျသှားရမှာ လေးတယျဆိုပွီး ပဈထညျ့ထားခဲ့တာမြိုးက ခဏခဏလုပျတာကလား :3 တကယျတော့ နပေူထဲ ရပျထားခဲ့တဲ့ကား၊ အလုံပိတျကားတှထေဲမှာ Laptop တှေ ထားခဲ့မိရငျ ကားထဲက အပူရှိနျတှေ၊ Pressure (ဖိအား) တှကေ Laptop ကို ပကျြစီးစပေါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
(၄) Laptop ကို ပါဝါပိတျဖို့ မမပေ့ါနဲ့
Laptop နဲ့ ဇာတျကားကွညျ့ရငျး အိပျပြျောသှားတဲ့ ယောငျးတှေ လကျထောငျပါ :3 Laptop ကို သုံးပွီးလို့ နရောက ခဏထသှားရငျးဖွဈဖွဈ၊ တဈခုခုသှားလုပျလိုကျရငျ ဖွဈဖွဈ Laptop က အလိုလို Sleep Mode on သှားတတျပါတယျ။ ကိုယျပွနျလာတဲ့အခါမှာ Laptop က ပိတျနသေလိုလို ဆိုတော့ တျောတျောမြားမြားက သွျောပိတျပွီးပွီပဲဆိုပွီး ကြျောသှားတတျပါတယျ။ အဲ.. နောကျတဈခါ အလုပျလုပျမယျဆိုတော့မှ ဟာ.. မပိတျထားရသေးပါလားဆိုပွီး ဖွဈရော.. တကယျတမျး Sleep Mode က Laptop ကို လုံးဝ အနားပေးထားတာ မဟုတျတော့ Laptop ကို ပကျြစီးစတော ကြိနျးသပေါပဲ။ အဲ့တော့ Laptop ကို မသုံးတော့ဘူးဆိုရငျ လုံးဝ ပိတျထားလိုကျပါ။
(၅) Cleanup ပုံမှနျလုပျပါ။
ဘာမှလညျး မသုံးဘဲနဲ့ စကျကွီးက လေးနတေယျဆိုတာမြိုး ဖွဈဖူးကွလား ယောငျးတို့… ဒါကို ဘယျလို ဖွရှေငျးရမလဲဆိုရငျ windows ထဲက Search bar > Disk Cleanup > Clean up System files > Ok ရှေးပေးလိုကျရငျ လေးနတေဲ့ ယာယီဒတောဖိုငျတှပေကျြသှားမှာပါနျော။ ပုံမှနျ Data တှေ၊ Cache တှေ ရှငျးမယျဆိုရငျ
Windows + R > Recent > Ctrl+A > Shift+Delete ဆိုတဲ့ အဆငျ့ဆငျ့နဲ့ Cache တှကေို ရှငျးပေးလို့ ရပါတယျ။ ဒီထဲက Prefetch, Temp, %temp% နဲ့ Recent ဆိုတာတှကေိုတော့ Box ထဲ ကိုယျ့ဘာသာ ရိုကျထညျ့ရမှာပေါ့နျော..
Related Article;အလုပျလုပျတဲ့အခါ လှယျကူမွနျဆနျစမေယျ့ ကှနျပြူတာကီးဘုတျ shortcut key မြား
(၆) ဘကျထရီကို တာရှညျခံအောငျ ထိနျးသိမျးပါ။
Laptop ကို အခြိနျအကွာကွီး အားသှငျးပွီး သုံးတာမြိုး၊ ကွိုးတပျလကျြ တနျးလနျးနဲ့ Laptop ကို သုံးနတောမြိုးဆိုရငျ ဘကျထရီကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ အားကုနျခါနီးထိ သုံး၊ အားသှငျး၊ အားပွညျ့ရငျ ပွနျဖွုတျ၊ အဲဒီလိုသုံးတာမြိုးက Laptop ရဲ့ ဘကျထရီသကျတမျးကို ပိုပွီး တာရှညျခံစပေါတယျ။ နောကျတဈခုက သုံးရငျး ဘကျထရီအရမျးပူလာတာမြိုးကလညျး ဘကျထရီကို ထိခိုကျစနေိုငျပါသေးတယျ။ ဒီလို အဖွဈကို ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ နညျးလမျးကတော့ နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ ပထမ တဈမြိုးက Laptop ဘကျထရီ အရမျးပူလာပွီဆိုရငျ Laptop သုံးတာ ရပျလိုကျတာ၊ နောကျတဈမြိုးကတော့ အောကျခံ ပနျကာ တပျပွီး သုံးတာပါ။ ဒီနညျးလမျး ၂ မြိုးနဲ့ဆိုရငျတော့ ဘကျထရီကို ထိခိုကျနှုနျးနညျးစပေါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
(၇) Antivirus Software တှေ ထညျ့သှငျးထားပါ။
Laptop ရဲ့ အပွငျဘကျက ပိုးမှားတှေ ရှငျးပွီးရငျ Laptop ရဲ့ Software တှထေဲ ဝငျလာနိုငျတဲ့ Virus တှကေိုလညျး ကာကှယျဖို့ လိုအပျပါသေးတယျ။ ဒီအတှကျ အလှယျဆုံးနဲ့ အရှငျးဆုံး နညျးလမျးကတော့ Antivirus Software တှကေို ထညျ့ထားလိုကျတာပါပဲ။ Antivirus Software တှေ ထညျ့သှငျးထားပွီးရငျတော့ ပုံမှနျ Update လုပျပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့လို့…
ဒီအခွခေံ အခကျြလေးတှကေို သိသှားပွီး ဒီတိုငျးလေး လိုကျလုပျမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့ Laptop လေးတှကေို သနျ့ရှငျးသပျရပျပေါ့ပါးစှာ အသုံးပွုနိုငျပါပွီရှငျ… အဲ.. Laptop ကို တဈခြိနျလုံးသုံးနတောထကျ ၁၅ မိနဈတဈခါလောကျ အဝေးတဈနရောကိုကွညျ့ပေးတာက မကျြလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုပွီး သငျ့တျောတယျဆိုလေးတော့ မမလေို့ကျနဲ့နျော..
Tags: Antivirus, battery, clean, keyboard, laptop, maintain, screen, tips, virus
၅ မိနစ်အတွင်း ဟာကွက်မရှိ ဖက်ရှင်ကျသွားအောင် ဘယ်လိုဝတ်ကြမလဲ?
Phyu Thant April 18, 2019